Naturist mahombekombe muAndalusia, anonyanya kushanyirwa | Kufamba Nhau
Naturist mahombekombe muAndalusia
Kana iwe ukaenda kuSpanish Yevashanyi Hofisi iwe unogona kuona kuti inofungidzira sei kuti vangangoita mamirioni 1 vashanyi vanoshanyira Spain zhizha rega rega nechinangwa chekuita nudism. Kune iyi nhamba kunogona kuwedzerwa imwe hafu yemiriyoni veSpanish avo vanogara kana nguva nenguva vanofarirawo kushambidza nezuva sekuvadzosera kwakaita mai vavo munyika.
Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kunanga kumahombekombe ekushama kunonakidzwa nemahombekombe vasina nyadzi uye vasina mafungidziro, vachifarira kuratidza miviri yavo vasina kupfeka vasina chimwe chinangwa kunze kwekubatana nemasikirwo.
1 Iwo emahombekombe emahombekombe eAndalusia
2 Kumahombekombe edu ekumaodzanyemba
2.3 Tropical pamhenderekedzo
2.4 Almeria gungwa
Iwo emahombekombe emahombekombe eAndalusia
Andalusia inharaunda yakazvimiririra ine makiromita mazhinji emahombekombe enudist muSpain, ndiko kuti, mahombekombe uko vanogeza havapfeke mbatya nguva dzose. Makova uye mahombekombe akabatikana anogona kuwanikwa uye vamwe vane vanhu vashoma, asi chokwadi ndechekuti kune nzvimbo zhinji kumahombekombe eAndalusia kuti uite nudism uye kuti iwe unogona kuita kuti muviri wako wese unyatsosvinwa. Rangarira kuti zvakakosha kuti ushandise dziviriro yezuva yakadzivirirwa, kunyanya munzvimbo idzo dzemuviri wako rine ganda rakapfava.
Zvakare uye sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, Kana iwe uchida kudzidzira nudism zvakare kunze kwemahombekombe ayo, iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvekare naturist pekugara saka iwe unogona kudzidzira nudism mune yakazara nyaradzo. Kune makambi akagadzirirwa izvi, mafurati, nzvimbo dzekumaruwa uye kunyange 4-nyeredzi mahotera. Iwe unongofanirwa kusarudza pekugara iwe yaunofarira zvakanyanya kuti ukwanise kuratidza muviri wako nenzira yakadzikama!
Kumahombekombe edu ekumaodzanyemba
Pakati peCádiz neHuelva tinogona kuwana mahombekombe akati wandei pakati pazvo zvese nudism uye swimwear zvinogara pamwe chete. Mamwe emahombekombe aya ndiBolonia, mudunhu reCádiz, kunyanya nudism nzvimbo iri kuruboshwe kwayo. Zahara de los atunes zvakare ine nudism nzvimbo paArroyo del Cañuelo Beach. Mhenderekedzo yeLos Castillejos muCaños de Meca, yakakomberedzwa nematombo uye musasa weLa Cala de Aceite zvakare yakatsaurira nzvimbo yeaturism. Kana iwe uchida kushanyira Conil de la Frontera, iwe unogona zvakare kupisa zuva usina kupfeka senge paCastinova kana La Mangueta beach.
Uye zvirokwazvo Iwe haugone kukanganwa Matalascañas ane mukurumbira muHuelva, yakakomberedzwa neDoñana National Park. Mahombekombe makuru anowanzo zara muzhizha, asi ine huru nudist pamhenderekedzo: Cuesta de Maneli
Iwo mahombekombe emasikirwo eCádiz neHuelva ari munzvimbo yegoridhe uye zvakare akakodzera kufamba, kumhanya, kutamba, kudzidzira mitambo uye kuva nenguva yakanaka. Mazhinji emahombekombe aya ane mukana wekusarudza kupfeka hembe kana kwete, saka iwe unogona kuona mapoka eshamwari kana mhuri vari nudist uye vamwe vasina. Asi vese vanoremekedzana.
Munzvimbo dzemumadhorobha emahombekombe, uko kune vanhu vashoma uye ivo vasina kuzara vanhu, iwe unogona zvakare kuwana yako nzvimbo ye naturism. Costa Natura yakatanhamara pamusoro pezvose, padyo nedunhu reMalaga reEstepona uye yakavhurwa muna 1979, sezvo yaive yekutanga naturist tata muSpain. Cabopino, muMarbella, iwe une gungwa rakareba kwazvo rakakomberedzwa nemadhonza nemiti yemipaini. Benalnatura muBenalmádena, iwe une diki naturist paradhiso yekunakidzwa nekutandara uye hunhu.
Zvakare iwe haufanire kurasikirwa nekuona kwemahombekombe eMijas uye enda kuNaturist Beach yePlaya Marina sezvo iri nyowani nyowani yemahombekombe enaturist muAndalusia, sezvo yakavhurwa mu2012.
Rimwe gungwa rinogona kukufarira riri kuGaudalmar, Torremolinos (Málaga) uko kwaunowana yepamutemo nudist pamhenderekedzo yeguta padhuze nemuromo werwizi rweGuadalhorce, munharaunda yeSan Julián.
Kunyangwe iyo Granada kumahombekombe isiri yakakura kwazvo, isu tinogona zvakare kuwana mamwe akanaka nudist mahombekombe ipapo seCantarriján, padhuze neAlmuñécar, Playa El Muerto muAlmuñécar pachayo, Playa de la Joya muMotril uye Negratin Reservoir munzvimbo dzakapoteredzwa neCuevas del Campo.
Kune akawanda nudist mahombekombe iwe aunogona kuwana kuCosta Tropical, saka iwe unofanirwa chete kusarudza iyo yaunofarira zvakanyanya kuti ugone kunakirwa negungwa, gungwa nemuviri wako pasi pezuva.
Vera Playa ndiye anonyanya kuzivikanwa uye naturist wenzvimbo iyi, nekuti mairi tinogona kuwana chaiyo naturist urbanizations uye kunyange 4-nyeredzi hotera, iyo Hotera Vera Playa Kirabhu, yakanakira kune vanoda mafirita ezuva akazara.
Asi sekunge izvo hazvina kukwana muCabo de Gata, San José unogona kuwana hupfumi hwemakomba akavanzika, mafambiro asinganzwisisike ematombo, makomo anoputika uye nudism mune mazhinji emahombekombe.
Pamhenderekedzo yevakafa, muCarboneras (maminetsi makumi matatu nemotokari kubva kuVera Playa), iri chikamu cheCabo de Gata-Níjar Natural Park, padyo neguta reCarboneras. Iko hakuna zvivakwa uye kupinda kuri netsoka kuburikidza neumwe museru wakadzika asi unogona kuwanikwa nyore netsoka. Iwo mahombekombe kupotsa asi iwo madiki uye haavhiringidze zvakanyanya. Iri gungwa rinozivikanwa neve naturists uye zvakare neavo vasingade kufukura. Vaviri naturist uye vasiri-naturists vanogovana uyu mahombekombe-
Sezvawaona, iwo mahombekombe eAndalusia azere nemahombekombe makuru, uye akanakisa ndeyekuti kana iwe uri munhu ane naturist iwe une zvakawanda zvimwe sarudzo kupfuura mune imwe chikamu chenyika. Naizvozvo, kana iwe uchida kupedza zhizha rakanyarara uye uchikwanisa kuenda kumahombekombe sezvo iwe uchinzwa wakasununguka kwazvo, iwe uchafanirwa chete kusarudza iyo nyanza yaunoda uye unakirwe nemuviri wako usina kupfeka.
Uye kana iwe uchida kuziva ese emahombekombe, iwe unongofanira kunyora pasi iwo aunoda kushanyira uye woita nzira yemahombekombe ezve naturist kusvikira iwe waona iyo yaunonyanya kufarira kushandisa zhizha rese. Asi rangarira, kana iwe uchida kuziva ese iwo, zvinogona kutora iwe kuti uzviwane iwo akati wandei zhizha, kune akawanda!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » España » Naturist mahombekombe muAndalusia
Iyo Levante Beach - Los Toruños del Puerto de Santa Maria inogona kuwedzerwa. Iri igungwa refu remakiromita pakati pekugara kwemaguta eValdelagrana neyaCadiz. Kugara kwakaderera, zvishoma nezvishoma uchibva kure nemaguta emahombekombe eValdelagrana, panogara paine mabhawa mashoma uye kushama kunowanzoitika. Mhepo ine mhepo yegungwa jecha, isina masevhisi. Iwe unogona kutosvika ikoko nechitima, kuburuka pachiteshi cheValdelagrana (Cercanias; kubatana kwakananga naCadiz naJerez, kubva kuSeville kana kuCordoba iwe unoda kuchinjiswa) uye kufamba makiromita mashoma.
Sango Rokuzviuraya muJapan